Naya Post Nepal | एमसीसीका बारेमा तपाईको धारणा के हो ? प्रचण्डले सोधेको प्रश्नमा ओलीले दिए यस्तो जवाफ
एमसीसीका बारेमा तपाईको धारणा के हो ? प्रचण्डले सोधेको प्रश्नमा ओलीले दिए यस्तो जवाफ
काठमाडौ । एमसीसीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्क कमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेका छन् । उनले ओलीलाई एमसीसीका बारेमा निर्णय लिन आ ग्रह गरेका थिए ।
बिहीबार साँझ प्रचण्डले ओलीलाई टेलिफोन गरेर एमसिसीबारे निर्णय गर्ने आग्रह गरेका हुन्। जवाफमा ओलीले एमसिसी पारित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले निर्णय लिन चुनौती दिएका छन् । उनले आफुलाई सरकारवाट हटाउनका लागि एमसीसीलाई पास गर्छु भन्दै पत्र लेखेको भन्दै प्रचण्डलाई पास गरेर देखाउन चुनौती दिए ।
ुमलाई हटाउन तपाईंहरूले एमसिसी पारित गर्ने भन्नुभयो। त्यसपछि पारित गर्नका समय पनि माग्नुभएको थियो । तपाईंहरूसँग बहुमत छ। यसबारे मलाई सोध्न जरूरी छैन भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका छन् । प्रचण्डलाई गठबन्धन पनि नटुटोस् र एमसीसी पनि पारित होस् भन्ने उद्देश्य छ । त्यसैले उनी छलफलमा लागेका छन् ।
एमसिसीबारे कुरा गर्न भनेर प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरेको विषयबारे एमाले प्रचार प्रसार विभागका उपप्रमुख बिष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा समेत राखेका छन्।
उनले लेखेका छन् एमसिसीमा तपाईंले निर्णय नगरी भएन भन्दै हिजो साँझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोन गर्दा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले तपाईंहरूले पहिले केपी ओलीलाई हटाएपछि पारित गर्छौं भन्ने वचन दिनुभएको छ। हटाइसकेपछि ‘४-५ महिनामा पारित गर्छौं’ भनेर लिखित कागज नै गर्नुभएको रहेछ। अहिले सत्ता चलाइरहनुभएको छ, प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्य छन्। पहिले आफूले निर्णय गर्नुस्, नेकपा (एमाले) त निर्णय गरिहाल्छ।
यसअघि बिहीबार बिहान अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डलाई एमसिसी संसदबाट पारित गर्नेबारे टेलिफोन गरेका थिए। तीनै जना नेताहरूसँगको कुराकानीमा उनले एमसिसी फेब्रुअरी २८ सम्म संसदबाट पारित हुनुपर्ने द वा व दिएका छन् ।
२०७८ फाल्गुन १, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 159 Views